काउकुती लाग्दा किन उठ्छ हाँसो ? यस्तो छ कारण ! « News of Nepal
काउकुती लाग्दा किन उठ्छ हाँसो ? यस्तो छ कारण !
कसैलाई काउकुती लगाएको बन्दै मन पर्दैन, कसैलाई पर्छ । तर यो व्यक्तिगत स्वभावको कुरा हो । त्यस्तै काउकुती लगाउँदा कोही हाँस्छन् त कोही रिसाउँछन् ।
काउकुती दई प्रकारका हुन्छन् एक हल्का किसिमको दबाब त अर्को केही कडा किसिमको दबाबले गर्दा हुने काउकुती जसले हाँसो उठाउँछ । अब काउकुती किन वा कसरी लाग्ने गर्छ भन्नेमा वैज्ञानिकहरु के भन्छन् त ? छालामा स्पर्श हुँदा त्यसमुनि रहेका स्नायुका टुप्पोले मस्तिष्कमा विद्युतीय सन्देश पठाउँछन् ।
काउकुती लगाउँदा हामी हाँस्नुको कारण चाहिँ स्नायुले पठाएको तरंग एकैपटक दुई भागमा पुग्छः एउटा स्पर्शको विश्लेषण गर्ने भागमा भने अर्को आनन्दको सञ्चार गर्ने भागमा । तर काउकुती लगाउँदा सधैँ रमाइलो मात्रै भने हुँदैन । किनकी त्यस कार्यले मस्तिष्कको त्यो भागलाई पनि सक्रिय पार्छ जसले हामीले अत्याउने गर्दछ ।
केही जनावरहरुलाई पनि काउकुती लाग्ने गर्छ । शार्कहरुलाई थुतुनोको ठीक मुनि काउकुती लगाउँदा तिनीहरुले क्निस्मिसिस् (हल्का काउकुती) महसुस गर्छन् । तर गार्गलिसिस्नि (कै हाँसउठ्तो काउकुती) चिम्पान्जी, गोरिल्लाहरुमा मात्र देखिन्छ ।